केपी र प्रचण्डलाई सुरेन्द्र ढकालको काउन्टर प्रश्न : ‘राजनीति गर्न चप्‍पल लगाएर काठमाडौं छिरेका तिमीहरु कसरी घर मालिक भयौं ? अब चिहान बास हुनेछ’::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
केपी र प्रचण्डलाई सुरेन्द्र ढकालको काउन्टर प्रश्न : ‘राजनीति गर्न चप्‍पल लगाएर काठमाडौं छिरेका तिमीहरु कसरी घर मालिक भयौं ? अब चिहान बास हुनेछ’
सुरेन्द्र ढकाल प्रकाशित : आइतवार, फाल्गुन २७, २०७४
काठमाडौँ – कालो मनि, मसल अनि मेडियाको अन्धधुन्द प्रयोग गरेर तिमीहरुले चुनाव जित्यौं । एक्लै जनताको अगाडि जान डरायौं त्यसैले गठवन्धन बनायौं । राष्ट्रवादी र भ्रष्टाचार विरोधी सानादलहरुले चुनाव जित्लान अनि नेपालको राजनीतिमा आफनो एकाधिकार अन्त्य होला भनेर साना दलहरुको चुनाव चिन्ह खोस्यौं तिमीहरुले । अहिलेको राजनीतिको म्यूजिकल चेयरका खेलाडी तिमीहरु तल भनिएका कुनैपनि कामहरु गर्न सत्तैmनौं भन्ने कुरा त्यो घाम जत्तिकै छर्लंग छ ।